Mifamadika & Woo Ireo Mpitsabo anao! | Martech Zone
Maro ny tsingerin'ny varotra amin'ny orinasa (B2B) lava sy sarotra. Fandanjana ny fitadidiana ny saina ambony indrindra miaraka amina fanantenana mandra-pahatongan'ny fanapahan-kevitra momba ny fividianana ary tsy ny fametahana azy ireo sy ny fandroahana azy ireo. Izaho dia nijery ny fitaizan'ny olona sasany mitarika tsara tokoa, ary napetrako tao amin'ny bokiko finday ny “Aza mamaly” mba hialana amin'ireo mpivarotra izay tsy.
Nilaza ny fikarohana fa mitentina 443 dolara ny famaritana ny vinavina iray raha 596 $ ny fitsidihana ny iray. Fa maninona no avelany hisintaka izy ireo? CEIR, Tatitra SM37, 2009
Tickle & Woo manana fomba hafa tanteraka. Misafidiana tombontsoa manokana maromaro ary 'misoratra anarana' amin'ny serivisy Tickle & Woo. Handefa izy ireo a Tickle Box amin'ny fanantenanao isam-bolana miaraka amina zavatra mahafinaritra ao izay ho ankafizin'izy ireo. Voatonta eo amin'ny fonosana ny sary famantarana sy ny mombamomba anao - manome fotoana iray isam-bolana amin'izany fanantenana izany hitadidy anao hatrany.
Ity misy topy topimaso momba ahoana ny fomba fiasany!
Azonao atao ny misafidy mailaka indray mandeha, famandrihana 6 volana, na famandrihana 12 volana - izany rehetra izany latsaky ny $ 100 isam-bolana isaky ny mpandray. Manana fomba amam-panao koa izy ireo
Tags: mitarika fikarakaranafikarakaranafanantenanafifandraisanamiketrika sy manambolamisaona woo
8 Novambra 2013 à 8:12
Tickle & Woo Toa loharanon'ny “tsy afaka miaina tsy misy an'ity” ity ho an'ny mpanatanteraka varotra. Tsy maintsy mahazo famandrihana ho an'ny ekipa mpivarotra ahy. Te-hahafantatra ny fomba fampitomboan'ny hafa ny varotra aho.
23 Novambra 2013 à 6:37
Tiako 🙂 Tiako ny mahita an'i Tickle & Woo miasa miaraka amin'ny MailLift 🙂